पहिलो अन्तराष्ट्रिय जब एण्ड करिअर फेयर – Bikas Times
पहिलो अन्तराष्ट्रिय जब एण्ड करिअर फेयर
आसाम डाउन टाउन यूनिभरसिटी पहिलो अन्तराष्ट्रिय जब एण्ड करिअर फेयर साउन अन्तिम साता राजधानीमा हुने भएको छ । भारतको आसाम डाउन टाउन विश्वविद्यालयको सहयोगमा अधिकारी क्रियटिभ कन्र्सनको आयोजनामा मेला गर्न लागेको हो । मुलुकमा ब्याप्त बेरोजगार न्यूनिकरण गर्न रोजगारीको खोजीमा रहेका शिक्षित युवा युवतीहरुलाई लक्षित गरेर लक्ष्मी एजुकेशनल कन्सल्टेन्सीको प्रायोजनमा साउन २७ र २८ मा भृकुटी मण्डपस्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा मेला गर्न लागेका हो ।
एसएलसी पछि तीन बषर््िाय डिप्ललोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर पढेका विद्यार्थीलाई रोजगार दिन रोजगारदाताहरु मेलामा सहभागि हुने छन् । मेलामा नेपाल र भारतका विभिन्न प्रख्यात कम्पनिहरुले सिधै रोजगारीका अवसर दिने छन् ।
भारतका प्रतिष्ठित कम्पनि रिलाइन्स जिओ र ¥याडिसन होटल मेलामा सहभागि हुने छन् । भारछको दुई कम्पनि मध्ये रिलाइन्स जिओ मोवाइल कम्पनि हो । उक्त कम्पनिले नेपालबाट इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरलाई मेलामा आउने युवा युवतीलाई छनौट गरेर रोजगारीको अवसर दिनेछ । त्यस्तै भारतीय कम्पनि रेडिसन होटल भारतको चेन बिजनेशको रुपमा प्रख्यात कम्पनि हो । यसले आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति मेलामै छनौट गर्नेछ । त्यस्तै मेलामा सहभागि नेपालका कर्पोरेट हाउसहरुले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति मेलाबाटै छनौट गर्न सक्नेछन् । नेपालका सिप्रदी, सद्धा, क्लाकि टेक, डीटीएस, बिरला टायर, सुबिसु, डिसहोम, यामाहा कम्पनिहरु सहभागि हुनेछन् ।
मेलामा आउने विद्यार्थीले आफनो बायोडाटा भने अनिवार्य ल्याउनु पर्ने हुन्छ । विद्यार्थीको योग्यता के छ ? रोजगारदाता कम्पनिले कस्ता कामदार माग गरेका छन ? दुबैलाई भेटाउन मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा सहभागि हुन निःशुल्क प्रवेश पासको व्यवस्था गरिएको छ । क्याम्पस टु कर्पोरेटको अवधारणा अनुसार मेला आयोजना गरिएको हो । मेलाले क्याम्पसको पढाई सकेका विद्यार्थीले रोजगारी खोज्दै भौतारिनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने छन्
मुलुकमा रोजगारीको समस्या छ । यो समस्या समाधान गर्ने उपयुक्त माध्यम यस्तै मेला हुनसक्छ । मेलामा जानेले रोजगारी दाता कम्पनि कसरी खोज्ने व्यक्तिगत विवरण (सीभी) कसरी बनाउने ? यस्ता बिषयमा परामर्श पनि पाइन्छ । प्लसटु देखि स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुले यो मेलाबाट फाइदा लिन सक्नेछन् । मेलामा ५ हजारले अवलोकन गर्ने अनुमाग गरेका छौ । लक्ष्मी एजुकेशनल कन्सलटेन्सी ले यस्ता कार्यक्रमहरु लाइ आगामी दिनहरु मा राजधानी बाहिर पनि आयोजना गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट शिक्षित बेरोजगार यूवा हरु ले बडि भन्दा बडि अवसर प्राप्त गर्न सक्ने विस्वार लिइएको छ ।
कलेजबाट सिधै कर्पोरेटसंग सम्पर्क
जागिरको लागि सहजै पहुच
रोजगारदाता र रोजगारको खोजी गर्ने युवा बीच सिधै सम्पर्क
कम्पनिको बारेमा जानकारी लिन पाइने
निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था